I-China ne-European Union bazohola phambili Isivumelwano SaseParis | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-China ne-Europe bazokukhokhela iSivumelwano se-Paris
Kusukela uDonald Trump wakhethwa njengoMongameli wase-United States, impi yokulwa nokuguquka kwesimo sezulu isiphelile ezweni lakho. Ngokusho kukaDonald Trump, ukuguquka kwesimo sezulu kungumqambi wamaShayina wokuthola ukuncintisana yingakho kusobala ukuthi iMelika ngeke isashola iSivumelwano saseParis.
UTrump uvale konke ukuhlela kwemvelo uBarack Obama noHulumeni waseChina abakwenza ndawonye, ehola izingxoxo zokuvala iSivumelwano SaseParis ngowezi-2015. Kodwa-ke, yize uTrump engasizanga ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu, iChina ne-Europe bazimisele ukuqhubekela phambili ukuhola le mpi.
1 Izinhlelo zemvelo zikhanselwe nguTrump
2 Imizamo yaseChina neYurophu
3 Ukuzibophezela kwe-European Union
Izinhlelo zemvelo zikhanselwe nguTrump
Izinhlelo ebezikhona ngaphambi kokuphathwa kukaTrump bezifuna ukuthi i-US ikwazi ukufeza izinhloso ezibekiwe ngesikhathi kusayinwa iSivumelwano SaseParis. Phakathi kwalezi zinhloso ukunciphisa ukukhishwa kwegesi ebamba ukushisa phakathi kuka-26% no-28% ngo-2025 uma kuqhathaniswa nango-2005. UKhomishani waseYurophu Wezenzo Zesimo Sezulu, uMiguel Arias Cañete, ubonile ukuthi, ngomyalelo ophethe kaTrump, i-US isele ingenawo "amathuluzi amakhulu" okuhlangabezana nalezo zinhloso.
Ekulweni nokuguquguquka kwesimo sezulu asisakwazi ukuthembela ekusekelweni yiMelika, kepha iChina neYurophu bazoqhubeka nokubheka phambili. Kokubili iChina neYurophu ngeke kushintshe izinqumo zabo, izinhloso kanye nenqubomgomo yokushintsha kwesimo sezulu, kodwa bazoqhubeka nemizamo ehleliwe yokuthuthukisa ikhwalithi yesimo sezulu.
Imizamo yaseChina neYurophu
Kusukela ngo-2013, iBrussels neBeijing bavale inkhulumomphendvulwano emayelana namandla nokuguquka kwesimo sezulu esezivuselelwe manje ukuze kuhlangatshezwane nezinhloso zesivumelwano saseParis. Inhloso yale ngxoxo ukukhulisa ukubambisana kumanethiwekhi wokuthuthwa kwamandla, ukwandisa ubuchwepheshe obusha, amandla avuselelekayo nokusebenza kahle kwamandla. Ngokusho kukaCañete, Ukuguquka kwesimo sezulu kuzodlala indima enkulu engqungqutheleni yaminyaka yonke phakathi kwe-EU neChina ezoba ngoJuni eBrussels.
I-China ne-EU baphinde bazibekela imigomo yokwehliswa kweSivumelwano SaseParis, njengoba kwenza namazwe angaba ngu-200 asayinile. Ukwehliswa kokukhishwa kwegesi ebamba ukushisa kuzosetshenziswa kusuka ngo-2020 futhi kuzoba ngokuzithandela. Lokho wukuthi, umbuso ngamunye ubeka izinhloso zawo. Igalelo leChina ekwehliseni ukungcola lincane kakhulu uma siliqhathanisa nomzamo ofunwa yi-European Union. Ukuphikisana kukaBeijing ukuthi abekho eqenjini lamazwe aseNtshonalanga adale inkinga yokuguquka kwesimo sezulu ngemuva kwamashumi eminyaka exosha i-CO2. Ukuzibophezela amaShayina anakho ukukwazi ukufinyelela inani eliphakeme lokukhishwa ngo-2030 futhi ukusuka lapho aqale ukunciphisa.
Ngokusho kochwepheshe, inani eliphakeme lokukhishwa kwe-China lizofika ngaphambi kuka-2030 njengoba ukusetshenziswa kwamalahle kuya ngokuya kuyekelwa futhi amandla avuselelekayo ayathuthukiswa.
Ukuzibophezela kwe-European Union
I-European Union inenhloso ephakeme kakhulu yesimo sezulu kuyo yonke imizamo yamazwe omhlaba selokhu i-US yalahla isivumelwano seKyoto Protocol ngo-2001 kunciphise ukukhishwa kwegesi engcolisa ukushisa okushisa ngokushisa ngama-40% ngo-2030 kusuka emazingeni ka-1990. Yize ngaphakathi kwe-EU kunokungezwani manje njengoba kuxoxiswana ngokusatshalaliswa phakathi kwamazwe emizamo nezinsimbi zokufeza inhloso yomhlaba. ISweden, iJalimane neFrance, ngokusho kombiko wakamuva weCarbon Market Watch, baphokophele ukuthuthukiswa kokuvelela kwezinqubomgomo zezulu. Ngenkathi elinye ibhlokhi, elinenhloko ebonakalayo yiPoland, ulayini oqonde kolunye uhlangothi.
I-China, i-US ne-Europe zibanga uhhafu wokukhishwa kwegesi engcolisa umhlaba. Kungakho ngaphandle komzamo nosizo lwe-United States, cishe u-15% wokukhishwa komhlaba uzoqhubeka nokukhishwa Futhi ngalokhu, kungaba nzima impela ukuhlangabezana nenhloso yaseParis: ukunciphisa amagesi abamba ukushisa ukuze ukwanda kwezinga lokushisa ekupheleni kwekhulu leminyaka kungadluli ama-2 degrees uma kuqhathaniswa namazinga angaphambi kwezimboni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-China ne-Europe bazokukhokhela iSivumelwano se-Paris